राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चेन अफ कमाण्ड नै भ्रष्ट
Saturday,2Jul, 2016 11:28 AM
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चिठि बोकेर प्रथम पटक जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदभार ग्रहण गर्न जाँदाको उत्साह राम्रै थियो । देशकै राजधानी काठमाडौंको उपाध्यक्ष हुनु आफैमा पनि गर्वको विषय हो । सदस्य सचिवज्यूको एकवर्षे कार्यकाल पुगिसकेको छ । ९ महिनको समयावधीमा हामी हिडिरहेका छौ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहतमा रहने जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सञ्चालन कसरी भएको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिले के कस्ता कामकारवाहीहरु गरेका छन । निति नियम अन्र्तगत कार्य गरेका छन वा छैनन यी सबै विषयहरुमा अनुगमनकर्ता र निर्देशकका रुपमा परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ तथा खेलकुद विकास नियम २०४९ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६ महिना भित्र लेखा परिक्षण गरी क्षेत्र र परिषद्मा पठाउने प्रावधान रहेको छ । के यो कार्यहरु जिल्ला खेलकुद विकास समिति मार्फत भएका छन ? लेखा परिक्षण जस्तो विषय हचुवाको भरमा हुने कुरा हो ? तोकिएको समय भित्र राज्यका जिम्मेवारी निकाएहरु लापरवाही र मनोमानी तर्फ बढने विषयलाइ परिषद्ले नजरअन्दाज गर्नु भ्रष्टाचार हैन ? प्रत्येक प्रतियोगीता वा आम्दामी खर्चका विवरणहरुका बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने विषयलाई अमुल्यन गर्नु भ्रष्टाचार हैन ? खेलकुदमा बाहिर बाट हेरेको जस्तो सुनेको अनि देखेको जस्तो न कुनै अनुसाशन छ । न एकता छ । न खेल, खेलाडी र प्रशिक्षकलाई समेट्ने योजनाहरु छ । खेलकुदमा जम्माजम्मी कमाउधन्दा रहेको छ । जिम्मेवार उपाध्यक्षका नाताले आफ्नो धुलो उडाउनुलाई
नेपाली परिवेशमा आफुले केहि नपाएपछि आएका गुनाशाका रुपमा यस विषयहरुलाई तर्कमा ढाल्ने प्रयाश पनि हुन्छ । यो किमार्थ सत्य कुरा होइन । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठन भएपश्चात जिल्लाले गरेका कामकारवाहीहरु विवरणहरुमा चुस्तदुरुस्त पाइदैन । पाँचौ खेलमहोत्सवका खेलाडीहरुको विवरण समेत उपलब्ध नहुने जिखेविसहरुमा आर्थिक लेखाजोखा कस्तो अवस्थामा होला आंकलन गर्न सकिन्छ । उपत्यका भित्रका समितिहरुको अवस्था त यस्तो छ भने अन्य जिल्लाहरु कुन अवस्थामा चलेका होलान सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । परिषद समक्ष मेरो प्रश्न छ नेपालमा कति जना खेलाडीहरु कुन कुन जिल्लामा कति छन थाहा छ परिषद्लाई छैन । राष्ट्रिय प्रतियोगीता जितेको गतवर्षको खेलाडी यस वर्ष काँहा छ कसलाई पत्तो हुदैन एकाध प्रशिक्षक बाहेक । हालसालै सम्पन्न राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगीता सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगीता सञ्चालन गर्न पुरस्कार सहित ४० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । विद्यालय तहको यो बृहत् महोत्सव सञ्चालनका लागि छुट्याइएको यो बजेट आफैले आफैलाई चड्कन हाने सरह देखिएको छ । तमाम् विषयहरुमा देखिएको यो समस्याको मुख्य जड हो जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संरचना ।
यो संरचनाले नेपाली खेलकुदलाई कहिल्यै उठ्न दिदैन । ४ वर्षे नियुक्ति लिएका हामीहरु भुमिका विहिन छौ । हामी संग दुईवटा मात्र बाटो छ एउटा बाटो बाँडिचुडी गरौ, अर्कौबाट कसैलाई पनि अघि बढ्न नदिउ । यो दुवै बाटाहरु खेलकुदका लागि घाटा छन । समग्र खेलकुदका लागि घाटा । कार्यलयका अध्यक्षको निगाहमा अन्य पदाधिकारीहरुले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन शिर्षकमा के कति बजेट आयो , कुन संस्थाको अवस्था कस्तो छ , के निति नियम बाट काम हुने गरेको छ ।सो विषयको जानकारी परिणामा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । एउटा उदाहरण काठमाडौंमा करिब ९० जना हाराहारी प्रशिक्षकहरु कार्यरत छन । आ.व. २०७२÷०७३ लागि स्वयमसेवक परिचानल भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना प्रशिक्षको नियुक्ती गरियो जिल्ला खेलकुदका अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रशासनका अधिकृत छनौट समिति मार्फत यो संसारको कुनैपनि राष्ट्र कहिल्यै पनि नगरिने कार्य हो ।
यस विषयमा कयौैं जिल्लाहरुमा ठुलै लापरवाही गरिएका प्रशस्त प्रमाणहरु हामी संग छन के यो भ्रष्टाचार हैन ? एउटा बालक जो भोलीको नेपाली खेलकुदको भविष्य हो उसको खेल जिवनलाई नै धक्का पुग्ने गरेर गरिएको त्यस योजनाले आर्थिक रुपमा खेलकुमा परेका भार त छदैछ । शारीरिक, मानसिक र समाजिक रुपमा पर्ने त्यसको प्रभावको कुनै मुल्य हुदैन । यस्तो अवस्थमा छ नेपाली खेलकुद । परिषदको वोर्डले अध्यक्ष चिन्दछ । अन्यलाई चिन्नै खोज्दैन । चिन्ने अवस्था आएपनि दलिय आस्थाका कारण नचिनेझै हुन्छ । सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यहरु आफै नै अनुत्तरित छन । परिषदको खाता सञ्चालन गर्न परिषदको कोषाध्यक्ष हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन । कुनै फरक समेत त्यसले पार्दैन । जब कोषको सञ्चालनमा कोषाध्यक्षको भुमिका नै हुन्न भने त्यस पद के लागि ? संरचना नै भ्रष्ट भएपछि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नु नौलो होइन ।
परिषदले सदस्यसचिव मात्र चिन्ने , कमिटिले अध्यक्ष मात्र चिन्ने यस व्यवस्थालाई समयमा नै खारेज गरेर नयाँ ऐन नल्याउने हो भने अब राष्ट्रिय खेलाडी बन्न पहिला पार्टीको राजनीति गर्नुपर्दछ । प्रशिक्षक रोजगार वा प्रमोशनका लागि दलिय अर्थ बलियो पार्नु पर्दछ । त्यस अवस्थाको सुरुवात नेपालमा भइसकेको छ । खेलकुदका परिणामहरुले यस्ता विषयहरुलाई साबित गर्दैगइरहेको छ ।
राष्ट्रिय संघहरुको निर्वाचनमा कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने, साधारण सभामा को प्रतिनिधी जाने भन्ने विषयमा न परिषदमा छलफल हुने प्रावधान छ । न ओलम्पिक कमिटिमा छ । न जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा त्यो व्यवस्था छ । अध्यक्षको र सदस्य सचिवको निगाह भएपछि न बैठक न योग्यता सिधै विशिष्ट श्रेणीको उपाधी व्यक्तिले पाउदछ । तर्सथ ओलम्पिक कमिटिलाई राष्ट्रिय खेलकुद बोर्ड मार्फत एक विभागको रुपमा राखेर अन्तराष्ट्रि मापदण्डको अधिकार दिनुपर्दछ । अन्यथा आफु अनुकुल अध्यक्ष र प्रतिनिधी बनाउने खेलमा जुटेका संस्थाहरुमा भ्रष्टाचार त भैहाल्छ क्रमसः हामीले यी संस्थाहरुलाई अदृष्य म्यानपावर कम्पनि बनाएको देख्नुपर्दछ ।